Ulo maka ikpuchi
N'obe ime obodo, otu n'ime ihe ndị bụ isi nke imepụta ebe ọdịda anyanwụ bụ ihe nkedo. A na-etokwa ya mma mgbe mgbe ya na ụlọ e gburu n'elu. Ọ dabara na ọ ga - ejide ụlọ, ụlọ ndị ọzọ na gburugburu ala.
Roofs maka gazebo
Ị nwere ike ịme ụlọ gazebos na ọtụtụ ụlọ: tent na dome, wavy na spherical, otu,, abụọ ma ọ bụ otutu na ọbụna n'ụdị pagoda. Mgbe ụfọdụ, arbors na-eme ndokwa nke ụlọ elu.
Osisi arbor nke eji osisi mee bu osisi kachasị mfe. Ihe mkpuchi dị otú ahụ na mkpọda n'otu ntụziaka na-enwe na mgbidi ndị dị iche iche dị elu. I kwesiri ima na na ebe a naghi echedo ya site na ifufe, olulu nke ulo kwesiri idi ala. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ ma ọ bụ n'ubi na-echebe ihe gazebo n'akụkụ niile, mgbe ahụ, ịrị elu ụlọ nwere ike ịdị ukwuu.
Ịrụ ụlọ osisi n'elu ụlọ maka ikpuchi iji chekwaa ihe. A na-ewu ya ngwa ngwa ma dị mfe idozi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Osisi arbor nwere elu igwe nwere ihe mara mma na nke oge a. N'ụlọ a ị nwere ike inwe ezigbo izu ike na ihu igwe ọkụ. Ụlọ dị otú ahụ na-echebe site na ọkụ ọkụ anyanwụ na ọdachi ndị ọzọ ihu igwe. E nwere ike ịwụnye ụlọ elu n'elu ogwe akụkụ anọ ma ọ bụ square.
Iji wuo ụlọ elu nke gaferebo dị nnọọ mfe ma ị nwere ike ime ya na obere ihe ọmụma na nkà, ọbụna na-enweghị enyemaka. Ụlọ dị otú ahụ agaghị enwe nnukwu ibu, ego ọ na-ere ya dịkwa obere. Tupu ịmalite ọrụ, ị ga-esere eserese ma ọ bụ obere esemokwu nke ọdịdị n'ọdịnihu. Nke a ga - ezere njehie n'oge echichi.
Maka elu ụlọ dị otú a, a pụrụ iji ihe dị n'elu ụlọ: tile, okpokoro osisi, polycarbonate, ondulin na ọbụna ụgbụ.
A pụrụ ịdabere na ya na-adịgide adịgide n'elu ụlọ maka gazebo. N'ihu ụlọ dị otú a nwere ọdịdị dị mma. Ọ bụrụ na arbor bụ akụkụ anọ, mgbe ahụ, ọ ga-ekpuchi ụlọ elu ya, ya bụ, inwe triangular triangular abụọ na trapezoidal. A na-ekpuchi ebe a na-ekpuchi oghere n'elu ụlọ, nke nwere ihe anọ yiri ya. Mgbe ị na-arụ ụlọ dị otú ahụ, a pụrụ iji ihe dị elu nke roofing mee ihe: teepu seramiiki, polycarbonate, mpịakọta n'elu ụlọ, wdg.
Hexagonal arbor na-adọrọ mmasị, ọ dị ọnụ na kọmpat n'otu oge ahụ. Elu ụlọ maka ụdị dị otú a dị nnọọ mfe ime karịa ụlọ ndị ọzọ. Iji mee ka ọhụụ dị ka ihe atụ, ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ụlọ tupu oge eruo. Maka imepụta ya, a pụrụ iji ihe dị iche iche mee ihe: chara, metal ma ọ bụ bitumen shingles, profaịlụ metal, polycarbonate, reeds or straw.
Ugboro ugboro, ụlọ elu hexagonal nke arbor nwere ọdịdị nke triangles abụọ, nke nwere oghere nke na-agbanwe na etiti. Ejiri Ogwe pụrụ iche, nke a na-akpọ mauerla, na-akwado mkpuchi niile. Ihe kachasị mkpa nke ụlọ elu hexagonal bụ ihe nkedo. Ha kwesiri ike idi elu ulo iji gbochie ibu ifufe na snow. A na-etinye ihe ndị a na-etinye n'ime ihe ndị ahụ, bụ nke na-adabere n'ihe onwunwe maka ụlọ. Mgbe ahụ, a na-etinye ihe mkpuchi mmiri na-adịghị ahụkebe n'elu ihe n'elu ihe n'elu ụlọ.
Enwere mpempe elu nke kachasị elu nke ọ na-adabere, ma mmiri na-abanye n'ime ụlọ ma ọ bụ. Ọ dabere n'ụzọ dị ukwuu n'ụdị ihe dị n'elu ụlọ.
Site n 'ụlọ dị elu, oke gazebo ga-ama mma na nke mbụ, ọ ga-aghọkwa ihe doro anya nke nhazi dum nke saịtị gị.
A na-eji ọkụ na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe
Uche imewe na ụdị minimalism
Uche dị iche iche na mba
Ntucha maka ime ụlọ nwata
Ulo elu okpukpu abụọ
Echiche maka ime ụlọ
Kedu esi kpuchie ụlọ na plastics?
Kitchens si MDF
Mgbaaka cartier - ọla ndị inyom mara mma
Kefir nri nke Larissa Dolina
Kylie Minogue kwupụtara na ya agaghị alụ di ma ọ bụ nwunye
Rhododendron - nkwadebe maka oyi
Usoro ọgwụ metroendometritis
Cherị dị ụtọ na-adị arọ
Ọfụ Ọhụrụ maka ụlọ akwụkwọ
Kalikodektaziya akụrụ - gini ka ọ bụ?
Ihe nchekwa stool nke nwere ike
Esi ewepu Kalanchoe?
Kedu ụdị mmụọ dị ugbu a - 2015
Omelette na nnukwu akpa na oven
Mmanụ ara ehi a gụrụ eghe
Toasts nke oji oji na garlic
Ezigbo Family: Jennifer Garner na umu na mama na-aga na marathon ọrụ